Tsy manana kiraro ny ankizy Cobblers | Martech Zone
Tsy manana kiraro ny ankizy Cobblers
Talata, Janoary 26, 2010 Talata, Septambra 1, 2015 Douglas Karr
Omaly aho dia nihaona tamina matihanina marketing eto an-tanàna. Fihaonana nahafinaritra ary tena nankasitrahako ny heviny sasany henjana azoko momba ny tranokalako. Raha tsorina dia efa nametraka tranokala tokana tena tsy mendrika aho 6 volana lasa izay ary tsy afaka nanova azy velively.
Izaho koa aza dia nanana asa be vita tamin'ny fanampian'i Mark Ballard tamin'ny tranokala vaovao… manaova sary miaraka amin'ny sary iStockphoto. Tena hahagaga izany - raha manam-potoana hamitana azy aho.
Ny marina dia, tsy azoko antoka izany mandrakizay manam-potoana hamitana azy. Ka… Namitaka aho ary nahita lohahevitra mahafinaritra izay azoko novidina sy namboarina tao anatin'ny ora maromaro. Notazomiko hatrany amin'ny 4 maraina teo aho tamin'ity maraina ity, saingy ilay tranonkala vaovao dia tsotra, hatramin'izay, ary manome ny fampahalalana ilain'ny olona momba izay DK New Media no.
Nandika ny iray amin'ireo fitsipiko momba ny famolavolana aho - mametraka ny atiny miaraka amina endritsoratra fotsy amin'ny maizina. Izay no mahasarotra ny fandevonan-kanina; Na izany aza, momba ny glitz miaraka amin'ity tranonkala ity aho ary tsy mifantoka amin'ny fitazonana mpitsidika loatra. Ity tranonkala iray pejy ity dia tena miavaka (aza hadino ny mivezivezy sy manindry ny fizarana serivisy).
Hisy fizarana ho an'ny mpiara-miasa atsy ho atsy satria io no ankamaroan'ny paikadin'ny orinasako. Ampahafantaro ahy ny fomba itiavanao azy hatreto!
Tags: DK New MediaWordPresssite web site
Bilaogy teknolojia 10 tsy fantatrao
Email HTML + Tags Alt = Amidy bebe kokoa ny Bagel